Boko Haram oo magaalo kale qabsatay - BBC News Somali
Boko Haram oo magaalo kale qabsatay
14 Nofembar 2014
Kooxda Jihaadiga ah ee Boko Haram, ayaa weerartay oo qabsatay magaalada Chibok ee waqooyiga bari ee dalka. Waa halkii ay ka qafaasheen in ka badan laba boqol oo gabdhood oo iskuul dhiganaysay todoba bilood muddo hadda laga joogo.
Kooxda Jihaadiga, ayaa ka qabsatay magaalada ciidamada military-ga, iyadoo lagu soo waramayo in ciidamada ay goobta ka carareen oo aysan dagaalamin.
Sida ay sheegayaa dadka ku noolaa deegaanka ayaa kooxda Boko Haram dagaalyahanadooda ay hadda gacanta ku hayaan magaalada Chibok. Markii ay weerareen xillig dambe maalintii Khamiista, ayaa dadka deegaanka ee carari karay iyo tiro yar oo ciidamada ah oo halkaa joogay ay isaga baxeen magaalada. Magaalada Chibok, ayaa magaceedu dunida gaaray kadib markii tiro badan oo gabdho iskuulay ah la afduubay bishii April ee la soo dhaafay.
219 ka mid ah ayaa wali maqan. Wixii markaa ka dambeeyay, waxay magaaladu ka cabanaysay in sidii la rabay loo ilaalin. In badan oo ka mid ah dadka deegaanka horay ugu noolaa waxay u guureen meelo kale oo ay ku badbaadi karaan iyagoo ka baqayay weerarkan oo kale.
Dhibaatada Nigeria ayaa sii xumaanaysay todobaad walba balse siyaasiyiiinta ayaa u muuqda in ay hadda diiradda saarayaan doorashooyinka sanadka soo socda.
Military-ga ayaa dhowr jeer oo hore ku guuldaraystay in uu difaaco magaalooyinka iyo tuulooyinka dhinaca waqooyiga bari ku yaalla, taasoo u ogolaatay kooxda jihaadiga ah ee Boko Haram in ay si joogto ah u sii ballaariso goobaha ay ka taliso.